Ciidamada ammaanka oo soo afjaray howl galkii Hotel Naasahablood 2, Qabtayna Dagaalamayaal ka tirsan Alshabaab. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Oct 29, 2017
Ciidamada ammaanka ee sida gaarka ah u tababaran ayaa saaka waabarigii soo afjaray howl galkii ka socday Hotelka Naasahablood 2, halkaasoo shalay gelinkii dambe ay gudaha u galeen dabley hubeysna oo ka tirsan Al-Shabaab.
Ciidamada ammaanka iyo dableyda hubeysan ayaa in ka badan 10 saacadood ku dagaalamayay gudaha Hotelka, waxaana jira khasaarooyin kala duwan oo ka dhashay.
Intii uu howl galka socday Ciidamada ammaanka ayaa soo bad baadiyay dad ka badan labaatan ruux oo ay ku jiraan Mas’uuliyiin, sida Wasiirka Tamarta iyo Biyaha Saalim Caliyow Ibrow, Wadaadka caanka ah Sheekh Cali Wajiis, Wariye hore Xasan Xundubey iyo dad kale oo fara badan.
Ciidamada ammaanka ayaa howl galka ka waday dhamaan dhismayaasha hotelka, waxaana ay ka soo galeen markii kore dabaqa sare, iyagoo illaa hoos u soo gudbay.
Dableyda hubeysan ayaa qolalka Hotelka ku dilay carruur, haween iyo dad Mas’uuliyiin ah, waxaana dadka dhintay ka mid ah Wasiirkii Arrimaha Gudaha Koofur Galbeed Madoobe Nuunow, Xildhibaan hore C/naasir Gaarane iyo Sarkaal boolis.
Sidoo kale dadka lagu dilay Hotelka waxaa ku jira hooyo iyo labo carruur ay dashay, waxaana dableyda ay adeegsanayeen bambaanooyin.
Wasaaradda Amniga ayaa sheegtay in nolosha lagu qabtay saddex ka mid ah dableydii weerarka ka dambeysay, wali saxaafada looma soo bandhigin.
In ka badan 20 ruux ayaa ku dhimatay qaraxa iyo toogashada ka dhacday Hotelka Naasahablood 2, waxaana dhaawaca uu ka badan yahay 30 ruux.
Weerarka lagu qaaday Hotelka Naasahablood ayaa waxaa uu isaga mid yihiin qaraxii dadka badan ku dhamaadeen ee Isgoyska Zoobe inuu dhacay galabnimo sabti ah, waxaana uu dhacay 14 maalmood kaddib qaraxaas boqolaalka ruux ku dhinteen.